Nezvedu - Qingdao Yi Xinyan International Trade Co., Ltd.
Stainless Seteel Rakasonererwa Mupiro Block Kupa
Thermoplastic Rakasonererwa Mupiro Block Stainless Simbi Kubereka
Miniature Bhora Kubereka
Imwe Row Cylindrical Roller Kubereka
Double Row Cylindrical Roller Kubereka
Mamwe Type Kubereka
Tsono Roller Kubereka
Linear Nhungamiro Kubereka
Lithium Yakavakirwa Mafuta
Calcium Base Lubricant Mafuta
Polyurea Base Lubricant Girisi
Bentonite Lubricant Mafuta
Silicone Lubricant Mafuta
Ita ZVEMAHARA ZVEMAHARA
KUSANGANISIRA FLEXIBLE PRICE
Piro Block Kubereka Ucp Series
Yakadzika Groove Bhora Kutakura 6000 Series
Idenderedzwa Roller mabheyaringi 22200 Series
Taper Roller Kubereka 30200 Series
Anopfuura Makore makumi maviri Echiitiko Mune Mabheyari Uye Girisi
Shining Viwanda China, isu tine matatu makambani kuitira kuti tipe yakanakisa masevhisi.
Isu tinotakura uye girisi yemusika musika anopfuura makore makumi maviri.
Kuunza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pasirese ndicho chinangwa chekutsvaga kwedu. We akasimbisa vezvokutengeserana kambani ekisipoti chikuru zvigadzirwa girisi uye akatakura muna Qingdao Port.
Qingdao YIXINYAN dzakawanda dzekutengeserana co., Ltd mhando BXY, chikuru chigadzirwa mutsamiro block inobereka, imwe mhando SKYN, icho chikuru chigadzirwa mafuta ekuzora.Qingdao QINGHENG kubereka co., Ltd muchiso QHW, chikuru chigadzirwa bhora mabheyaringi uye roller mabheyaringi.Qingdao SENZEXIANG dzakawanda dzekutengeserana co., Ltd mhando SZX , chikuru chigadzirwa insulator.
Yedu kambani yakamisikidza kutsvagisa nekusimudzira, dhizaini, kugadzirwa seimwe yepamusoro tech bhizinesi, yakasimba technical technical. Iyo kambani ine yakakwana uye yepamberi inobereka yakakosha yekuyedza michina, CNC kukuya muchina, yakakwira kunyatso kutakura kune izvo zvigadzirwa zvine yakanyanya kunyatso uye nekuisa hwaro hwakasimba.
Iyo kambani inoteedzera kune yemhando yemudzi, mhando-yakatarisana bhizinesi chinangwa, kune vazhinji vevatsva nevakuru vatengi kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, anozivikanwa maronda ekugadzira anotakura uye mafuta emafuta indasitiri. Isu tinogamuchira nemoyo wese vezvemabhizimusi epamba nekune dzimwe nyika kuti vataure kubatana pamwe nekuvandudzika kwakajairika.
Yangu kambani zvigadzirwa zvinotengesa zvakakurumbira mune dzinopfuura makumi maviri Nyika, kusanganisira Europe, America, Africa, Southeast Asia nedzimwe nyika.
Iye zvino fekitori main zvigadzirwa zvinogona panzvimbo yeiyo chaiyo chaiyo, inorema kurodha kunze kwenyika mabheyaringi. Yedu fekitori muLiao Cheng Guta, ese anotakura mhando muchinyatso kuenderana ne ISO9001 yemhando sisitimu manejimendi, imwe yekiyi yekunze yekutengeserana kambani yekunze. Iye zvino tinogona kupa Rakasonererwa Mupiro Block Kupa, Deep Groove Ball Muchibereka, idenderedzwa Roller Kupa, Tapered Roller Kupa, Cylindrical Roller Kupa, Tambanudzira Ball Kubereka uye nezvimwe zvigadzirwa zvekugadzira uye chishandiso. Kambani yakanyoreswa trademark "BXY", "FXY", "QHW" "SKYN" pamwe yakatsiva zvigadzirwa zvekupinza. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya nemhando yepamusoro michina, zvigayo zvesimbi, kuchera marasha, kusimudza, munda wemafuta, simba remhepo, mota, bepa nemamwe maindasitiri, vese vatengi vangu vatsva nevakuru vanofarira zvigadzirwa zvedu.
Isu tinoshandawo mumhando dzese dzemabhizimusi emafuta akadai secalcium base grease, yakaoma lithium base grease, yakanyanya tembiricha mafuta girisi uye zvichingodaro. Yedu yese timu, yakabata nyanzvi mainjiniya timu ine hupfumi ruzivo mune petrochemical zvigadzirwa kusimudzira, edza kutsvaga ma mechanics musimboti wemakaniki kukweshera uye basa mukuvandudza, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yekuzora mafuta mafuta akateedzana zvigadzirwa, zvine chinangwa chekupa vatengi nyanzvi yekuzodza zvigadzirwa uye zvakarongeka mhinduro uye nekupa sevhisi kune vatengi mune anopfuura makumi maindasitiri kuita kuti vatengi 'zvishandiso zvishomane kukakavara uye kuwedzere mafuta!
Makuru Makwikwi Kubatsira
· Tiri pamusoro pe10years yehunyanzvi ruzivo sekugadzira mafuta ekuzora.
· Isu tinogadzira pasuru seyako dhizaini kana ako masampuli zvizere.
· Tine simba rekutsvagisa nekuvandudza timu kugadzirisa matambudziko egirisi.
· Kune akawanda evatengesi vezvinhu zvakasvibirira kutenderera fekitori yedu, takabatana makore mazhinji.
Diki miedzo yekuyedza inogona kugamuchirwa, yemahara sampuro inowanikwa.
Mutengo wedu unonzwisisika uye unochengetedza mhando yepamusoro kune vese vatengi.
· Hwakanaka Hunhu
Bvuma Kuedzwa Kudiki
· Yemahara Dhizaini Packaging
· Mharidzo Inowanikwa
Kutsvagisa nekusimudzira kugona
Yakakura Kugadzira Kugona
Yenguva Yakareba Kubatana
Isu tiri kunyanya nezve zvakapetwa kuhwina pamwe chinangwa, ndiko kusarudza kwekutanga, iwe kudzora purofiti isu tinosimbirira pahunhu, isu tiri wako akavimbika mupiki, isu takasimbisa pabasa, ndiyo yekutanga sarudzo yekuti iwe unoda kushandira kwenguva refu, Chikwata chedu chine zvishuwo zvepamusoro soro
isu hatisi chete bhizinesi shamwari, tinokoshesa kusangana, saka isu tine basa rekuchengetedza hukama hwakanaka. Tinosimbirira "Ita bhizimusi remhando yepamusoro, taurirana mutengo unonzwisisika." Kusvika parizvino, kutsvaga kwedu zvinangwa kunokwezva vazhinji vanoita-bhizinesi shamwari.